अार्थिक खबर Archives - Page 45 of 118 - Purbeli News
काठमाडौं। यो साता सुनको भाउ लगातार घट्ने क्रम जारी छ । आज सुनको भाउ प्रतितोला चार सय रुपैयाँ घट्दा ५४ हजार सात सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । हिजो सुनको भाउ प्रतितोला ५५ हजार एक सय रुपैयाँ थियो । त्यस्तै चाँदीको भाउ पनि १० रुपैयाँले घटेको छ । आज चाँदी प्रतितोला ७ सय ८० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
DLG अवार्डद्वारा “चोकोफन” सम्मानित
कन्फेक्सनरी उत्पादन कम्पनी सुजल फुड्स प्रा. लि. को चकलेट “चोकोफन” ले विश्वमै प्रतिष्ठित DLG अवार्ड प्राप्त गरेको छ । विगत १७ वर्षदेखि नेपालभरीका बालबालिकाहरुलाई रमाइलो स्वाद अनि खुशी पस्कदै आएको चोकोफनले ख्यातिप्राप्त "DLG Silver Award” को प्राप्तिबाट यसको विश्वस्तरीय क्वालिटि अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्रमाणित भएको छ । DLG अवार्ड Deutsche Landwi...
बिरगंजमा शिवम् सिमेन्टको सन्देशमुलक ‘नो कम्प्रोमाईज’ अभियान
काठमाडौँ । शिवम् सिमेन्ट आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वलाई लिएर बिरगंज पुगेको छ । यस अन्तर्गत शिवम्ले, बिरगंजका प्रमुख चोकहरु, अस्पताल, पार्क, सडक लगायत विभिन्न ठाउँमा सन्देशमुलक ‘नो कम्प्रोमाईज’ प्लेकार्ड बोकेका व्याक्तिहरु उभ्याएको छ । आममानिसको दैनिक जिवनशैली र सोचमा सकारात्मक प्रभाव पार्न र मानिसहरुलाई जागरुक गर्ने उद्येश्यले साधारण तर संवेदनशील वि...
पुनःनिर्माणमा रेडक्रसले सात अर्ब ७२ करोड खर्च गर्दै
काठमाडौँ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले आफूले पुनःनिर्माण गर्ने जिम्मा पाएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सात हजार आवासमध्ये पाँच सय ६८ आवास निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण र सोसाइटीका बीच विसं २०७३ जेठ १० गते भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामध्ये नुवाकोट, रामेछाप, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा, रसुवा, काभ्रेपलाञ्चोक र मकवानपुरका ११ गाविसमा सात ...
आज पनि ह्वातै घट्यो सुनको भाउ
काठमाडौं। सुनको भाउ आज पनि घटेको छ । आज सुन प्रतितोला दुई सय रुपैयाँले घट्दा ५५ हजार एक सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । चाँदीको भाउ भने हिजोकै मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ । चाँदी प्रतितोला सात सय ९० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको हो ।
वीरगन्ज । वैशाखको पहिलो साता आएको असिनाबाट बारा जिल्लामा रु ७० करोड मूल्य बराबरको गहुँ बाली क्षति भएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बाराका अनुसार सो असिनाबाट जिल्लाको करिब १५ वटा गाविसमा लगाएको गहुँ बालीमध्ये रु ७० करोड मूल्य बराबरको २४ हजार ७३१ मेट्रिक टन गहुँ क्षति भएको हो । जिल्लामा यस वर्ष किसानले २८ हेक्टर ९०० हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँखेती ...
काठमाडौँ / उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले १० वर्षभित्र नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेश जानै नपर्ने गरी स्वदेशमै रोजगारी बढाउन एउटा स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा उद्योग स्थापना गर्ने योजना भइरहेको बताउनुभएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले आयोजना गरेको १३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा नवीनतम प्रविधि प्रदर्शनी–२०७४ को आज समापन कार्...
काठमाडौं। सुनको भाउ आज घटेको छ । आज प्रतितोला सुनको मू्ल्य तीन सय घट्दा ५५ हजार तीन सय रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपला सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । हिजो सुनको मूल्य ५५ हजार पाँच सय रूपैयाँ थियो । त्यस्तै चाँदीको मूल्य पनि आज प्रतितोला १० रूपैयाँ घटेको छ । आज चाँदी ७ सय ९० रूपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
म्याग्दी । म्याग्दी र बागलुङ जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने ठूलो खोलामा पुल नहुँदा खोला वारीपारीका लागि दुवै जिल्लाका बासिन्दा समस्यामा परेका छन् । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–२ र बागलुङको मालिका पञ्चासेको सिमाना भएर बग्ने ठूलोखोलामा पुल नहुँदा दुवै जिल्लाका बासिन्दा समस्यामा परेका हुन् । हिउँदमा कुनै समस्या नभए पनि वर्षामा खोलो वारपार गर्न नसक्दा समस्...
तीन अर्ब ३५ करोड बढी राजस्व सङ्कलित
चितवन । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले गत आवको नौ महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा करिब रु तीन अर्ब ३५ करोड बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयका कर अधिकृत जीवराज निरौलाका अनुसार गत आवको ९ महिनामा करिब रु सात अर्ब ७१ करोड राजस्व सङ्कलन भएकामा चालु आवको नौ महिनामा करिब रु ११ अर्ब छ करोड राजस्व सङ्कलन भएको हो । गत आव २०७२÷७३ को चैत मसान्तस...
दाहाललाइ श्रद्धाञ्जली दिनेको भिड ; पेरिस डाँडा
प्रकाशको आजै अन्त्येष्टि गरिने काठमाडौं
सम्झनामा प्रकाश (तस्विरहरू)